China 2019 Eserese na-atọ cute anụmanụ isi yinye metal isi yinye cheap obere onyinye ụgbọ ala isi yinye factory na suppliers | Han Ying
Mkpụrụ ego purses
akpụkpọ anụ akpa
Agirlgle anụmanụ ubi resin ezi oyiyi anụmanụ resin ...
N'ogbe Piel Silicone Pensul Case Omenala Zi ...
Office Cylindrical Pensul Case Yi Student Sta ...
N'ogbe mara mma katọn Nlereanya Pensul obere akpa School an ...
N'ogbe Korean version ihe ejiji dị mfe lov ...
Dike Omenala Large ikike Student Kanvas Penci ...
Hot n'ire green nnukwu ike na-amụrụ pen bag lov ...
N'ogbe na-ekpo ọkụ ire mara mma Nchekwa Pensul obere akpa Student ...
N'ogbe Eserese na-atọ mara mma agụmakwụkwọ Bag Pensul obere akpa A ...
N'ogbe Flamingo Nlereanya mara mma Eserese na-atọ akpa ego S ...
2019 Eserese na-atọ cute anụmanụ isi yinye metal isi yinye cheap obere onyinye ụgbọ ala isi yinye
Carabiner Eriri Ngakọ Igodo
Metal, Zinc alloy + enubakwa
Zinc alloy + enubakwa
Safaya, ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ, agba aja aja, nwa, isi awọ, ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọchịchịrị red, pink
2000 Ibe / iberibe kwa Day
Ningbo, Shanghai ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ị chọrọ ke China
1Professional mmepụta nke plastic ngwaahịa, dị ka plastic akpụkpọ ụkwụ ogbe, kichin nchekwa igbe, ime ụlọ ịwụ nchekwa igbe, ntecha nchekwa igbe nke usoro.
2nkwakọ imewe dị ka ndị ahịa chọrọ , ahaziri nkwakọ , na nkwakọ nwekwara ike akara na edenyere (logo) ahịa, ịgbakwunye "mere china" ihennyapade na na, na nke ahụ bụ ga-enyere anyị ahịa na ịgbasa nwere ahịa, na D eveloping gị onwe ika mmetụta.
3anyị na-enweta anyị production development department na setịpụrụ ọhụrụ ụkpụrụ ofexcellence maka ngwaahịa mmepe na imewe.
Product Name HANYING isi ígwè
ihe Zinc alloy + enubakwa
mbukota 12pcs / OPP
katọn Size 35 * 30 * 30cm
1. FedEx / DHL / gbasie / TNT maka samples , Door-to-Door;
2. Site Air ma ọ bụ site Sea maka ogbe ibu , maka FCL; Airport / Port ndibọbọ;
3. Ahịa ikwu ibu forwarders ma ọ bụ agbanweli mbupu ụzọ!
4. nzipu Time : 3-7 ụbọchị n'ihi na samples; 5-25 ụbọchị maka ogbe ngwongwo.
1. Ịkwụ Ụgwọ: T / T, Western Union ( ugwo-online)
2.All isi kaadị akwụmụgwọ na-anabata site ala ugwo processor escrow.
3. Ịkwụ Ụgwọ kasị-mere n'ime ụbọchị 3 nke iji
Yiwu Han Daily N ecessities Co. Ltd. bụ ihe integrated ụlọ ọrụ na ya factory, anyị nwere isii alaka ọrụ a ngụkọta nke ihe karịrị 1,000 ndị mmadụ, na-elekwasị anya mepere emepe home nchekwa usoro nke ngwaahịa mmepe.
Ngwaahịa na-exported na Europe, na United States, na Middle East karịa 20 mba na mpaghara.
Anyị na ngwaahịa fashionable na pụrụ iche style, agba ejiji, ezi uche dị ọnụ, ikenyeneke mbiet technology, magburu onwe ọrụ ụlọ ọrụ na-erube isi ịtụkwasị obi, meriwo ntụkwasị obi nke ndị ahịa na obodo otuto.
Gị afọ ojuju bụ anyị na-achụso, welcome uwa enyi m bịara ileta, nduzi, azụmahịa mkpakorita.
Na akara na enterprise mmụọ nke "ịdị n'otu na pragmatic, na-asụ ụzọ na otutu" andthe enterprise echiche nke "na-adị ndụ site na mma na ịzụlite site n'aka"
anyị mgbe niile nyochaa ma na-enwe ọganihu na-atụ anya ebube ka ukwuu. Olileanya na ọtụtụ ndị ọrụ ibe m ọnụ ike akụ na ụba akụkọ.
Previous: 2018 Animal nkebisi akpa ego Silicone akpa ego Obere obere akpa
Next: 2019 New Products Christmas Onyinye Zinc Alloy Nka Eriri Ngakọ Igodo Omenala Unicorn Key Chain
N'ogbe Eserese na-atọ Eriri Ngakọ Igodo Yi ero Ke ...
N'ogbe Sale Eserese na-atọ Eriri Ngakọ Igodo Children Toy Ke ...
N'ogbe Eserese na-atọ Eriri Ngakọ Igodo Children Toy Elephan ...
N'ogbe Eserese na-atọ Animal nkebisi Eriri Ngakọ Igodo Childre ...
Amazon Hot ere 3D Mini Eserese na-atọ Eriri Ngakọ Igodo Cut ...
2019 New Products Christmas Onyinye Zinc Alloy Cra ...
Metal gbamgbam Pensul Box , ịkwanyere Jelly akpa ego N'ihi Girls , Crystal Pig Keychain, Small Mini Cute Emoji Keychain, Silicon Pensul Case , Keychain With Logo,